Copa America: Xulka Brazil oo guul sahlan la ka gaartay Peru, Xilli Neymar uu markale shabaqa soo taabtay – Gool FM
(Brasília) 18 Juun 2021. Xulka Brazil ayaa guul sahlan ka gaartay dhiggooda Peru ciyaar qeyb ka ahayd tartanka Copa America, xilli Neymar Jr uu markale shabaqa soo taabtay kulankan.
Brazil ayaa 4-0 ku dubtay Peru, iyadoo goolka hore uu yimid qeybtii koowaad ee ciyaarta, waxaana dhaliyey 12’daqiiqo Alex Sandro kaddib caawin uu ka helay Gabriel Jesus, sidaas ayaana lagu kala nastay Peru oo looga gacan sarreeyey 1-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayay Brazil la soo galeen ciyaarta dardar, waxaana ay la yimaadeen saddex gool ee kale oo ay kala dhaliyeen 68’daqiiqo Neymar, 89’daqiiqo Everton Ribeiro iyo daqiiqadihii lagu daray dhammaadkii ciyaarta oo uu dhaliyey Richarlison, xulka Brazil ayaana ku badiyey 4-0.
Xulka Brazil ayaa qaab wanaagsan ku bilowday Copa America 2021, iyagoo labadii kulan oo ay ciyaareen guuleystay, 7 gool dhaliyey, isla markaana aan wax gool ah laga dhalin muddaadas.
Guushaas waxa ay xulka Brazil uga dhigan tahay inay hoggaanka u hayaan Guruubkooda B iyagoo leh lix dhibcood, maadaama ay guuleysteen labadii kulan oo ay ciyaareen tartankan illaa iyo haatan.
Dhinaca kale xulka Colombia ayaa kulan qeyb ka ahaa Guruubkan barbaro goolal la’aan ah la dhaafi waayey dhiggooda Venezuela, waxaana ay taasi ka dhigan tahay in xulka Colombia ay ku jiraan kaalinta labaad ee Guruubkan iyagoo leh 4-dhibcood.